IRenmark River Villas-48B James Ave (enephuli) - I-Airbnb
IRenmark River Villas-48B James Ave (enephuli)
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguDeanne
Enye yeevillas ezimbini zeeholide ezinokuthi zihlale abantu aba-1 ukuya kwabasi-8, amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2. Ibekwe kuphela i-40 mtrs ukusuka emlanjeni kwaye kukuhamba nje okufutshane ukuya edolophini. Ukuzimela, ukutsalwa kwe-a/c kunye nendawo efihlakeleyo ene-bbq. Ukhuseleko lokupaka iimoto ezi-2 kunye/okanye isikhephe. Xa iqela elikhulu lizithathela kuzo zombini iivillas, iindwendwe zaseVilla A zinokufikelela kwipool yaseVilla B. Qaphela:Xa kuhleli isibini esingaphezulu kwesinye, siyakuvula igumbi lokulala lesibini nelesithathu kunye negumbi lokuhlambela lesibini njengoko kufuneka.
Renmark River Villas - 48B James Avenue (enechibi) - 2 ubusuku ubuncinane. Ifakwe kwimizuzu emi-5 yokuhamba phambi komlambo ukusuka kwilokishi yaseRenmark
IRenmark yenye yeedolophu ezi-5 ezinkulu eziyinxalenye yoMmandla weRiverland. Njengoko idolophu nganye ikwindawo ekufutshane neyokuqhuba, ukutyelela iindawo ezininzi ezinomtsalane kwidolophu nganye kunokwenziwa ngokulula ukusuka kwindawo yakho yokuhlala kunye neeBhoti kunye neBedzzz Houseboat Stays.
Ummandla we-Riverland waziwa kakhulu ngoMlambo i-Murray, kodwa kuninzi kakhulu ukubona nokwenza oko kuya kwenza ukuba ufune ukuhlala ixesha elide. , i-rose ihamba, i-antique shopping, ukuthatha i-movie okanye umdlalo, ukusondela kunye nobuqu kunye nezilwanyana zasendle kukukhankanya nje ezimbalwa - kukho into ehambelana nayo yonke iminyaka kunye nokuthanda.
Ngokukhanya kwelanga okuninzi kunye neminyhadala eyenzekayo unyaka wonke, nanini na lixesha elilungileyo lokuza kundwendwela iRiverland !!!
Nceda ubhekisele ku "Izinto ekumele zenziwe" ithebhu (phantsi ko "Info Jikelele") kwiwebhusayithi yethu ukuze ufumane amakhonkco eRenmark kunye neRiverland Attractions kunye neDining kunye nemigama yokuhamba phakathi kweedolophu zaseRiverland.